Abrir Word comaúltima posição salva do cursor – တေလာ Lopes ツဘလော့
Não tenho costume de postar nada sobre o Word, mas como essa dica ajudou muitoaum amigo, então resolvi publicá-la. Sem rodeios, tudo o que você temafazer é abrir o seu documento do Word (anteriormente salvoefechado)epressionar as teclas Shift + F5. O detalhe é que só funciona em arquivos .doc, ထိုကွောငျ့, se você tentar com .docx, esse truque simplesmente não vai funcionar. ကောင်းသောကံ!
စုစုပေါင်း access: 24608
5 de Março de 2013 တေလာ Lopes	cursor word, salvar cursor, salvar posição cursor, word
Isso realmente me ajudou, ရရှိခဲ့သည်
16 de Março de 2013 သို့ 18:34
နောက်ခံမှာ .bat script ကို run [ပြေလည်] days ago ငါသည်ငါ့ network ပေါ်မှာတချို့ Windows စက်တွေနောက်ခံအတွက် .bat ဇာတ်ညွှန်းသို့ပွေးလေ၏လိုအပ် (အသုံးပြုသူအသိပေးစာမပါဘဲ). ဤသူသည်သင်တို့လိုအပ်ကဘာလဲဆိုရငျ, ရှေ့ဆက်သွား!	Introdução Batch ou arquivo de lote (လည်းငါတွေ့ဆုံခဲ့ ...
Welvisley Nascimento, ကပြောပါတယ်: ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, o meu as vezes marca em lugares que não estive
Nihil, ကပြောပါတယ်: Você é Dez. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့.
ပက်ထရီရှာ, ကပြောပါတယ်: ကအလုပ်လုပ်ခဲ့. ကြေးဇူးတငျစကား!
Alexandre, ကပြောပါတယ်: Excellent ကလူအပေါင်းတို့သည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်း.
တေလာ Lopes, ကပြောပါတယ်: Evandro, ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း. ကြည့်ရှု, code ကိုမှန်ကန်စွာနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခံရလျှင် (ကြိုတင်နံပါတ်များနှင့်အတူ), ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့ကစားသမားအချို့ကိုဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသို့မဟုတ်ပုံစံဖြစ်ပါသည်. Pre-format နဲ့မဆိုကြင်နာလည်းမရှိလျှင်ကစားသမားများ၏နည်းပညာပိုင်းကို manual ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ ...
fr Reginaldo Luiz, ကပြောပါတယ်: ဂုဏ်ယူပါတယ်တေလာ, ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ didactic!! သငျသညျတူညီသောကောင်လေးများမှာ! ပွေ့ဖက်နှင့်သင့်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား!
evandro aguiar, ကပြောပါတယ်: ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါလျှောက်လွှာကြောင်းကုဒ်မီးစက်လုပ်, လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်များအတွက်, ဒါကြောင့်အရာခပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ထုတ်ပေး, ဒါပေမယ့်ဖတ်ရှုဖို့ထားသည့်အခါ, ကစားသမားတစ်ဦးကိုထည့်လေ့မရှိ “သုည” code ကိုဂဏန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌. ငါ့ကိုဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါအဘယျသို့သိစေ? ထားရှိခြင်းသည် ...
ဝီလျံ Gigliozzi, ကပြောပါတယ်: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ရည်မှန်းချက်နှင့်ရှင်းလင်းသော. အကြီးအဆောင်းပါး!
ရိုဒရီဂို, ကပြောပါတယ်: တူညီတဲ့ပြဿနာကိုငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်. မှားနေသော parameter သည် '' VMs အား Windows ကို’
နန်စီ, ကပြောပါတယ်: ငါတူအတိအကျပြဿနာရှိ…
မူပိုင်ခွင့် © 2017 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 1.564.230 ဝင်ရောက်ခွင့် | ယခု